1 ကုဗမီတာလျှင်ဘိလပ်မြေအိတ်များ M
အင်္ဂတေ : သဲ : နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက် အလေးချိန်အားဖြင့်
သဲ (1 တစ်တန်)
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက် (1 တစ်တန်)
လိုအပ်သောအချိုး Specify ။
E - ကွန်ကရစ်၏လိုအပ်သောငွေပမာဏ။ ဒါဟာကုဗမီတာအတွက်ညွှန်ပြနေသည်။
M - ဘယ်နှစ်ယောက်ကွန်ကရစ် 1 ကုဗမီတာများအတွက်လိုအပ်သောဘိလပ်မြေအိတ်များ။
K - ဘိလပ်မြေတစ်အိတ်၏အလေးချိန်။ ကီလိုဂရမျတှငျ။
သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာပစ္စည်းတန်ဖိုးကို Specify ။
အလေးချိန်အားဖြင့်မဟုတ်, အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအမြောက်အများပစ္စည်းတွေရဲ့စျေးနှုန်းတွေ recalculate ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သူများကအကြံပြုအဖြစ်ဘိလပ်မြေအချိုးအစားနှင့်စားသုံးမှု, ကွန်ကရစ်တစ်ဦးက default တုံးအောင်ဘို့သဲနှင့်ကျောက်စရစ်, ကိုးကားပေးထားကြသည်။
အလားတူပဲ, ဘိလပ်မြေ, သဲ၏စျေးနှုန်း, ကျောက်စရစ်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
အချောကွန်ကရစ်အရောအနှောများဖွဲ့စည်းမှု၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည် (အုပ်စု) နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက်သို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်, ဘိလပ်မြေအမှတ်တံဆိပ်၎င်း၏လတ်ဆတ်တဲ့။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်ခြင်းဘိလပ်မြေစဉ်အတွင်း၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများရှုံးသိရနှင့်ဘိလပ်မြေအရည်အသွေးအမြင့်မားသောစိုထိုင်းဆမှာပိုပြီးလျှင်မြန်စွာဆိုးရွားသွားဖြစ်ပါတယ်။ ဘိလပ်မြေအိတ် 50 ကီလိုဂရမ်လိုက်ခြင်းကျမ်းစာ၌ရေးထားမကြိုက်ဘူးချိန်နိုငျကွောငျးကိုသတိပြုပါ။ ယုံကြည်ကိုးစား, ဒါပေမယ့်အတည်ပြုရန်။ ဘယ်လောက်ဘိလပ်မြေသင်အကောင်းဆုံးစစ်ဆေးမှုများသွန်းလောင်းလေ၏။
သဲနှင့်ကျောက်စရစ်၏ကုန်ကျစရိတ် 1 တစ်တန်များအတွက်အစီအစဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောကြောင်းသတိပြုပါ။ စျေးသည်များလည်းသဲကုဗမီတာသို့မဟုတ်ကြေမွသောကျောက်နှုန်းစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်ကြေညာခဲ့သည်။
သဲတိကျတဲ့အလေးချိန်က၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဥပမာ, မြစ်သဲတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထက် သာ. လေး၏။
ကျောက်စရစ်နှင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရကြောကျခဲ။ ထိုအစိတ်အပိုင်းအပေါ် မူတည်. 1200 မှ 2500 ကီလိုဂရမ်အထိအမျိုးမျိုးသောသတင်းရပ်ကွက်များအဆိုအရ 1 ကုဗမီတာအလေးချိန် (အရွယ်). လေးလံ - ဒဏ်ငွေထက်ပို။